musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Mhirizhonga Anti-Vax Mhirizhonga Dutu BBC London Studios
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mhirizhonga Anti-Vax Vapurotesitendi Dutu BBC London Studios
Vapurotesitendi vanotenda kuti hutungamiriri hwenyika huriko nemakambani emishonga nemakambani enhau kuti vanyengere veruzhinji nezvechirwere uye majekiseni.
Varatidziri vanorwisa BBC Studios muLondon.
Anti-COVID Pass vapikisi vanopesana nemapurisa eLondon.
VaLondon vanopikisa kuunzwa kwepasipoti yekudzivirira uye kubaiwa kwevana.
Rine hukasha boka revanopesana-COVID vanopfuura vanopikisa vakarwisa uye vakaedza kupaza BBC studio paTerevhizheni Center muWest London.
Ruzhinji rwevanhu veLondon vanopokana nehurongwa hwehurumende hweCOVID-19 vakarwisana nemapurisa, vachiyedza kupwanya chivakwa ichi.
Kurwisana kunoshamisa pamusuwo weiyo studio dzeBBC kwakapfurwa nezvapupu panzvimbo iyi. Mifananidzo yakaratidza gumi nemaviri kana kupfuura Metropolitan Mapurisa achimhanyisa kumisa varatidziri, avo vairatidza kuve nechinangwa chekumanikidza kupinda mukati.
Hasha dzakakwira zvakanyanya sezvo nhengo dzeboka rairatidzira dzakazomira muketani yevanhu pamberi pemapurisa, vachiudza vamwe vairatidzira kuti varambe vari mumutsara. Ruzhinji, iro rakakurumidza kukura muhuwandu, rakatanga kuimba, "Kunyara iwe!", Asi rakadzivisa kuyedza kupinda mukati zvakare. Vashoma vevana vakamira kuseri kwechaunga vakabatana nekuimba.
The Metropolitan Police yakati "yaiziva nezveboka revaratidziri" kunze kwenzvimbo dzeBBC studio muWood Lane, White City.
"Panga pasina kusungwa, asi vakuru varipo uye vacharamba vachiona mamiriro ezvinhu," akadaro mutauri wemapurisa.
Iyo BBC yakati yaisazotaura nezve nyaya dzekuchengetedza. Zviratidzo zveLivestream kubva pachiitiko zvakaratidza vanhu mukati mechivakwa vachiisa matafura padivi pemamwe madhoo akakiiwa, ayo varatidziri vakatora semuyedzo wekuvhara masuo.
Varatidziri vacho havana kuvimba nemaitiro ehurumende nezvechirwere cheCovid-19 - kunyanya kuunzwa kwepasipoti yekudzivirira uye kubayisa vana. Vanotenda kuti hutungamiriri hwenyika huriko nemakambani emishonga nemakambani enhau kuti vanyengere veruzhinji nezvechirwere uye majekiseni.
Iyo BBC sezviri pachena yakasarudzika kuve nhepfenyuro inotsigirwa neruzhinji - iyo, mumaonero evaratidziri, iri kuita mukufarira hurumende kwete vanhu veBritain.
Guam Inopa Mahara Guåhan Trolley Service muTumon
Yakachipa uye inodhura-shanu-nyeredzi kufamba maguta muUS
Jamaica Inosimbisa 50+ Ndege Nyowani Vhiki nevhiki Pakati peCanada ...
India inogumisa zvese zvinorambidzwa kufamba, ichivhurazve miganhu ...
Iyo Regis San Francisco Inodaidza Nyowani Mutungamiriri Mukuru
Hawaii Hotel Revenue inokura panguva rekodhi COVID-19 ...
Nyowani yeAirbus Imwe-Aisle Airspace kabhini inowedzera nyaradzo ku ...
Ndege dzese dzakanzurwa, madoko akavharwa seShanghai brace ...
Nei Jamaica? Mhinduro kuUS "Usa ...
Zvinotenderwa masiki anodzokera kuLondon Underground
Dzidza Nezve Medicare Nhasi muMahara Online Webinar
Ko iyo Coronavirus yakabva kupi chaizvo?
Aha: Nevada Airline itsva yakavakirwa muReno - Tahoe
Nyowani Rolls-Royce Yese-Magetsi Ndege Chaiyo Inotora ...
Chegumi chete kubva muzana bhiriyoni mota dzakachengeteka chaizvo
New Link Yakawanikwa Pakati peAlzheimer's uye ...
Aeroflot inofamba nendege kuenda kuMexico, Jordan, Dominican ...
Kubhururuka kutanga kwaNyamavhuvhu: Seychelles zvinyorwa zvakanaka ...
Ndege yevafambi inopaza nekutsva muTexas, vanhu makumi maviri nemumwe ...
CDC Inokurumidza Meseji yeVachekeri veAmerica: Iyo ...
Kupona kwekitsi hombe dzemu Africa: mhuka dzesango nekushanya ...
United Airlines Yazivisa Nyowani Isiri-Mira Ndege kubva ku ...
Inokurumidza kubva kuSuperstar "Vanilla Ice" uye ...
Nyowani Continental Yekushanya Mibayiro Yakapihwa neAfrica ...
Seychelles Inovhura Kuenda kuSouth Africa
Russia Kuwedzera Yekushanya Module kune Yayo Inotevera Space Chiteshi
Sunny Seychelles Inogashira Kudzoka New Air France Flight
Masiki, Lederhosen, uye doro ok pane nyowani Air Canada ...
Vols kubva kuMoscow kuenda kuHurghada uye Sharm El Sheikh pa ...
Admin Relax‏ anoti:
Gunyana 20, 2021 pa 13: 31
Pete currier anoti:
Nyamavhuvhu 10, 2021 pa21: 07
Manyepo uye kusaziva kwazara pa internet asi vanhu vachiri kutora izvo zvavanoverenga sechokwadi. Mamiriro akasiririsa kwazvo atinozviwana tiri mumazuva ano.